Waxgaradka deegaanka Cal-Bari oo cambaareeyay dilkii Xildhibaan Bile Maxamuud Yuusuf, soona jeediyey in wax laga qabto falkaasi. – Radio Daljir
Waxgaradka deegaanka Cal-Bari oo cambaareeyay dilkii Xildhibaan Bile Maxamuud Yuusuf, soona jeediyey in wax laga qabto falkaasi.
Boossaso,Jan 28 -Waxgarad kasoo jeeda degmooyinka Baargaal iyo Calluula ee gobolka Bari ayaa maanta kulan ay ku yeesheen magaalada Boosaaso waxaa ay uga hadleen dilkii gudaha deegaankaasi loogu gaystay Xildhibaan Bile Maxamuud Yuusuf oo katirsan gobolaha wakiilada Puntland,ayna kooxo hubaysan xalay ay ku dileen kantaroolka degmada Baargaal ee gobolka Bari.
Kulanka ayaa waxaa isugu yimid nabadoono iyo odayaal deegaankaasi kasoo jeeda,waxaana ka mid ah duubabkii dhaqanka ee ka qaybgalay kulankaan Beeldaajaha deegaanka Cal Bari Beeldaaje Ismaaciil Beeldaaje Yaasiin,waxaana dadkii kulanka ka qaybagalau tacsi guud ay u direen eheladii,shacabkii iyo dadwaynihii uu ka geeriyooday xildhibaan Bile.
Beeljaaha deegaanka Calbari Beeldaaje Ismaaciil Beeldaaje Yaasiin ayaa isagoo ka hadlayayay kulanka,waxaa uu sheegay inay siweyn u cambaaraynayaan dilka xildhibaanka waxaana uu u mahadceliyay shacabka degmada Baargaal oo uu tilmaamay inay qabteen gacan ku dhiiglihii dilka gaystay si’aysan xaaladda amaan ee deegaankaasi Baargaal u noqon mid faraha ka baxda.
Faarax Fuqyare oo isaguna ka mid ah qurbejoogta deegaanka Baargaal ayaa isaguna ka sheekeeyay taariiqda xildhibaanka,isagoona sheegay xildhibaanka inuu ku dhashay degmada Calluula 1957,xildhibaanka ayaa waxaa uu dugsiga hoose kaga baxay degmada Caluula,markii uu dhamaystay dugsiga hoose ayaa waxaa loo qaatay ciidamada booliska Soomaaliyeed,mudo dheer kadibna waxaa uu kusoo laabtay degmada Calluula oo uu ka noqday taarwale.
Faarax Fuqyare ayaa sidoo kale sheegay xildhibaanka inuu ifka kaga tagay 16-carruur ah,waxaana xiligii ay burburtay dowladii dhexe ee Soomaaliya uu soo qabtay shaqooyin kale duwan oo ay ka mid ahayd hogaamiye dhaqameed,xildhibaan iyo farsamo yaqaan.
Allah,ha u naxariistee Xildhibaan Bile Maxamuud Yuusuf ayaa waxaa dilkiisa uu dhacay xilli uu ku jiray socaal uu ugu ambabaxayay degmada Baargaal si’uu uga shaqeeyo wanaajinta xiriirka dowladda Puntland iyo shacabka deegaanada Baargaal iyo Calluula,waxaana la filayaa maalmaha inagu soo fool leh in aas qaran loogu sameeyo magaalada Boosaaso,iyadoona ay ka qaybgali doonaan masuuliyiin katirsan dowladda Puntland iyo dadwayne tiro badan.